Runtii 'hacker' macnaheedu ma | FromLinux | ChrisADR | Laga soo bilaabo Linux
Waa maxay 'hacker' runti macnaheedu
ChrisADR | | Kuwa kale
Waad ku mahadsan tahay Guillermo soo jeedinta mawduuca qoraalkan, waa wax in kasta oo aan nasiib u yeesho inaan noolaado, aanan garanaynin in hore looga qoray halkan iyo in kale, laakiin sikastoo ay ahaataba mar labaad ayaan u soo bandhigi doonaa iftiinka si aan ula wadaago in yar kula joogo 🙂
1 Farshaxanka noqoshada Hackers
1.1 Nuxurka hacker
1.2 Hackers ugu horeysay
2 Beel taageerta
2.1 Aqoontani waxay u oggolaaneysaa inay helaan dayacanka
3 Hackers-ku qasab maahan inay yihiin dambiilayaal
3.1 Ujeeddooyinka hacker
3.2 3 nooc oo khawano maanta ah
4 Hackers ayaa tan ka dhigaya adduun ka wanaagsan
5 Muuqaalka kama dambeysta ah
Farshaxanka noqoshada Hackers
Mid ka mid ah buugaagta sida aadka ah ii soo jiitay mawduucan ayaa shaki la’aan ah Jabsiga: Farshaxanka Isticmaalka, de Jon erickson. Waxay u tahay jawharad qof kasta oo doonaya inuu nafsaddiisa ku quuso adduunkan run haakarisku. Hadana sida ku jirta buugga, waxaan u oggolaan doonaa naftayda inaan qaato su'aasha ugu horreysa ee maskaxdayda qarxisay markii aan akhrinayay.
Adoo adeegsanaya mid kasta oo ka mid ah lambarradan soo socda 1,3,4 iyo 6 si sax ah mar mid kasta oo ka mid ah hawlgallada aasaasiga ah (ku dar, jar, ku dhufo, ku qayb) hel wadar ahaan 24. lambar kasta waa in la adeegsadaa mar keliya amarkuna adiga ayuu kugu xidhan yahay. Tusaale ahaan:
Ku sax sanduuqa, laakiin khalad ayaa ku jira natiijada.
Waa inaan qiraa inaanan xallin karin dhibaatada ilaa aan dhammeeyo aqrinta buugga oo aan arko xalka bogga ugu dambeeya. Laakiin asal ahaan tani waa nuxurka hacker, inuu awood u yeesho inuu arko waxa dadka kale aysan arkin.
Hackers ugu horeysay
Koox arday ah oo ka socota MIT (Machadka Massachusetts ee Teknolojiyada), qiyaastii 50-meeyadii, waxay heleen deeq qalab telefon ah, xubnahan, waxay soo saareen nidaam u oggolaanaya iyaga inay ka maareeyaan khadka isgaarsiinta meel fog iyagoo u maraya wicitaano gaar ah. Waxay sameeyeen daah-fur iyagoo adeegsanaya tikniyoolajiyaddii horey u jirtay, laakiin waxay u adeegsadeen qaabab yar ama aan cidna horay u arag. Kuwani waxay ahaayeen kharibaadkii ugu horreeyay.
Maanta waxaa jira imtixaano badan oo "shahaado" ah oo lagu noqdo "Hackers", laakiin xaqiiqadu waxay tahay in qofku uusan noqon doonin hacker dhab ah illaa xubin ka tirsan bulshada oo horey u noqotay hacker ay ogolaato inuu noogu yeero isreebreebkaas. Mid ka mid ah siyaabaha loo sameyn karo tan ayaa ah inaad karti u yeelan karto wax bulshada anfacaya. Hackers badan ayaa ugu dambeyntii barnaamij hooseeya, maadaama ay faham qoto dheer ka leeyihiin sida kumbuyuutarradu u shaqeeyaan, heerka xusuusta iyo nidaamka hawlgalka; waxoogaa sida uguhoreysa
Aqoontani waxay u oggolaaneysaa inay helaan dayacanka
Tani waxay la mid tahay markii ugu horreysay ee aan baranayno xisaabta, markii aan carruurta ahayn, waxaan u baahannay qof noo sharxa oo na bara astaamaha iyo qaababka, tanina waxay ku dhacdaa si gaar ah barnaamijyada sidoo kale, hacker-hayaha dhabta ahi waa midka garanaya astaamahan iyo qaababkan, iyo waxay na tusinaysaa markay aragto inaan ku guuldareysanay adeegsiga (nuglaansho). Iyo sida Linus Torvalds laftiisa (khabiir kale oo weyn, macnaha dhabta ah ee ereyga) "nuglaanta" waa kaliya cayayaanka. Iyadoo tan loola jeedo xaqiiqda ah inaysan iyagu ka badneyn qaladaadka barnaamijka, in kasta oo laga yaabo inay jiraan noocyo kale oo cawaaqib ah oo ku saabsan cayayaanka badanaaba
Hackers-ku qasab maahan inay yihiin dambiilayaal
Tani waa run illaa heer, aan ka fikirno daqiiqad. Marku jabiyaha dhabta ahi doonayo inuu wax ogaado, wuxuu tijaabiyaa xitaa faahfaahinta ugu yar nidaamka, aqoontiisa oo dhan wuu ka leexan karaa, ama ka fogaan karaa xakamaynta marinka, ama wax ka beddeli karaa amarrada si uu u qabto hawlo kale, ama xitaa u beddelo barnaamijka mid kale. shay. Laakiin xaggee bay tani ka timaaddaa?
Kuwani waxay ku socon karaan fursado badan oo kala duwan, qaar ka mid ah (kuwa ugu khatarta badan runta ah) waxay ogaadaan waxa ay ku ogaadaan caqliga caqliga badan, waxay ku raaxeystaan ​​caqabadda helitaanka 'nusqaamaha'. Kuwa kale waxay ku sameeyaan damac, maxaa yeelay waxay rabaan inay awoodaan inay dhahaan iyagu waxbaa ugu fiican. Laakiin waa wax aan la dafiri karin in qaarkood ama qaar badan oo iyaga ka mid ah ay iyaguna halkaas u joogi doonaan lacagta, maaddaama xakamaynta waxyaabaha aan xakamayn karin dadka intiisa badani hubaal tahay aalad soo saari karta lacag aad u badan. Tani waa sababta aan u dhihi karno kuwa wax jabsada maya Waa qasab inay xun yihiin, laakiin isaga iska ilaali daruuri.
Sababta kale ee muhiimka ahi waa taas Anonymous dhab ah ma aaminaan tikniyoolajiyadda aan dhammaanteen adeegsanno. Tani waa sababta oo ah aqoontooda qotada dheer ee nidaamka, waxay yaqaanaan xaddidaadda iyo dulduleelada ama u nuglaanta. Cilmigani waa kan ugu dambeeya ee u oggolaanaya inay "dhaafaan" nidaamyada si ay u gutaan qaar ka mid ah dhiirrigelintooda kale (aqooneed, dhaqaale, iwm).
3 nooc oo khawano maanta ah
Maanta waxaan ka heli karnaa 3 koox oo loo yaqaan 'hackers', oo lagu kala soocay qaab yaab leh nooca koofiyadda ay xirtaan: caddaan, madow y koofiyad cawlan Hadal kooban iyo isbarbardhig aan horay u soo dhignay, waxaan ku ogaaneynaa in cadaanku yihiin wiilasha wanaagsan, madowgu xun yahay, cowskuna ay dhexda kujiraan halkaasoo ay u adeegsanayaan awoodooda inay ku ahaadaan wanaag ama xumaan, waxay kuxirantahay xaalada . Laakiin waxaa jira hal xilli oo la soo dhaafay, wax badan ayaa loo isticmaalaa wareegyada hacker. dhab ah.
Waa maxay qoraalka-kiddie? Sida magaciisu sheegayo, isagu waa "ilmo" indhaha runta hortooda Anonymous kaas oo kaliya u adeegsada qoraallo faa iidadaada ah. Oo halkan waa inaad sameysaa farqi weyn,
In laguu caddeeyo amniga kombiyuutarka qasab maahan inuu kaa dhigo khabiir jabsade.
Tanina waa aragti shaqsiyeed, sidoo kale a Hackers waxaa laga yaabaa inaad tahay mid aan la hubin oo wali noqon kara hacker weyn. Laakiin aan aragno sababta aan sidaas u leeyahay. Imtixaano badan oo shahaado / koorsooyin / iwm ah ayaa ku baraya tillaabooyinka a daloolin guuleysta, waxay ku barayaan aragtida nuglaanta noocyada, waxay ku barayaan adduunka nabadgelyada kombiyuutarka sidii aad aqoon fiican u lahayd maadada. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay illaa iyo intaad wax ku biirinayso bulshada Hackers, tani waxay ka dhigan tahay, ilaa maya samee aalad in cadee waxtar kuwa wax jabsada ma tihid mid. Si fudud oo fudud.
Si kastaba ha noqotee sida ugu wanaagsan ee aad u isticmaali karto nmap, ama zen, ama xitaa metasploit, illaa iyo inta aadan awoodin inaad bixiso adeegsi dhab ah, ama aalad dib u habeyn dhab ah, MA Aheyd hacker, kaliya waxaad tahay qoraal-kiddie, mana yeeleyso 'Macno malahan inaad haysato shahaadooyinka amniga N, taasi ma bedeleyso.
Hackers ayaa tan ka dhigaya adduun ka wanaagsan
Iyagaa ku mahadsan iyaga oo aan leenahay tiknoolajiyad dhaqdhaqaaq joogto ah leh. Maska ayaa tusaale weyn u ah tan, waxaa jira boqollaal maskaxood oo aad ugu xeel dheer maadada, yaa abuur nambarka aan u adeegin oo keliya bulshada haakariska ah, laakiin adduunka oo dhan. Laakiin intaas kaliya maahan, haddii aysan iyaga ahayn, tiknoolijiyada ayaa fadhiisin doonta meelaha dadku aysan dooneynin inay sii wadaan horumarka, tan maxaa yeelay helitaanka nuglaanta, haakarisku waxay ka caawiyaan dhiirrigelinta horumariyeyaasha inay qoraan koodh ka wanaagsan, isla markaana, tan ayaa ka sii wanaagsan koodhku wuxuu ku dhiirrigeliyaa dadka wax jabsada inay caddeeyaan inay xitaa ka fiican yihiin, iyagoo abuuraya wareeg wanaagsan oo u dhexeeya
Muuqaalka kama dambeysta ah
Hagaag, waan jarayaa, sida oo kale, maxaa yeelay waxaan arkay in aan faafiyo in kasta oo aan jeclaan lahaa inaan wax yar ka sharaxo sida loo helo ka faa'iidaysiga, taasi waxay noqon doontaa wakhti kale. Anigu shaqsiyan wali waxaan isu tixgeliyaa 'script-kiddie', in kastoo inkasta oo aan ka helay xoogaa nuglaansho halkaas ah oo xitaa aan awoodo inaan u qoondeeyo CVEs iyaga, wali ma aanan abuurin ka faa'iideysi ama qalab aan bulshada ugu bandhigo, laakiin waxaan rajaynayaa inay isbeddelaan waqti yar 😉 Adigoon sii dheerayn, aad baad ugu mahadsan tahay waqtigaaga, salaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Kuwa kale » Waa maxay 'hacker' runti macnaheedu
Shaki kuma jiro inaadan ahayn blogger caadi ah, waxaad si qoto dheer u ogtahay waxaad ku hadlayso.
Waxaan rajeynayaa inaad noqotid Hackers weyn, laakiin ha joojin la wadaagida qoraalladan cajiibka ah.
Ku jawaab Mart
Aad baad ugu mahadsantahay Mart fikirkaaga nooca ah 🙂 maxaa yeelay taasi waa fikradda, in la dhiso adduun ka wanaagsan oo nabdoon. Waxaan rabaa inaan qoro qoraal yar oo ku saabsan sida faa iidada runti u shaqeyso, laakiin hal ama labo dhibaato ayaan kala kulmayaa Shutterkayga, waxaan arki doonaa sida ugu dhaqsaha badan ee loo saxo 🙂 salaan
Ku jawaab ChrisADR
Juan Jose Munoz Ortega dijo
Hackers-ku ma ahan dambiile, waa jecel nahay aqoonta, waa qof ku raaxeysta kuna raaxeysta in la arko koodh furfuristiisa iyo ogaanshaha sida ay u shaqeyso tan iyo markii aan ku jiray adduunka kumbuyuutarka ilaa iyo markii aan ahaa horumariye marwalba waan xiiseynayay waana ku mahadsanyahay internetka hada helitaan badan oo macluumaadka ah oo aan heli karo oo keliya markii aan bilaabay buugaagta waxtarka wanaagsan
Jawaab Juan Juan Muñoz Ortega
Juan José run ah,
Waxaan si cajiib ah ugu farxi lahaa inaan awood u yeesho inaan naftayda u huro cilmi baarista mustaqbalka, waa wax laga xumaado in goobtani ay tahay mid aan ku horumarin Peru, laakiin xoogaa nasiib ah waxaan heli doonaa wax la mid ah markaan dhamaysto waxbarashadayda sanadka soo socda 🙂
Ma iga caawin kartaa inaan rakibo Subterfuge ???
Jawaab Mike MM
Ma aanan helin fursad aan ku tijaabiyo, wax yar ayaan u socdaa si aan u qoro marka loo eego gaadiidka, weli ma aanan gelin goobtaas. Laakiin wixii aan awooday inaan baaro waxaa jiray dhibaatooyin yar oo ka imid haajiriddii ka timid Python2 ilaa Python3, habka ugu wanaagsan ee lagu tababarto waxay noqoneysaa in la akhriyo qoraalka rakibidda oo la arko waxa dhici kara, ixtiraam 🙂
macluumaadkani wuxuu ka badan yahay midka la midka ah ee ka muuqda cisko ammaanka-lama huraanka ah ... Ma sii garan karo cidda dhabta ah ee qoraalkan ka hadashay ..!
Ku jawaab inaad jabsato-el-hardinero
Ma isiin kartaa waxyar oo macluumaad ah? Ma hubo macluumaadka 🙂 laakiin sida xaqiiqda ah waxaa jira sharraxaad macquul ah oo ka badan.
Maalmahan, noqoshada hacker waxay ka dhigan tahay inaad tahay qof caan ah oo sumcad iyo lacag badan leh, naftaada kor u qaadis iyo xayeysiinta baraha bulshada, inaad si guud ugu soo bandhigto internetka, inaad kaligood ceshato aqoonta adiga oo kaa qaadaya xuquuqda difaacaya xorriyaddaada iyo inaad adeegsato barnaamijyada iyo nidaamyada ma yihiin 100% koodh. bilaash. Haddii ay la kulmaan astaamahan, waxay horeba u noqon karaan haakaris, ama haddii kale waxaa loo arkaa inay yihiin dambiilayaal ilaalinaya oo difaacaya asturnaantooda.
Ku soo jawaab Conrad
Aniga ahaan erayga "Hacker" wuxuu ii noqday hadal aan loo dulqaadan karin, waxaan doorbidaa erayga pentester ama si fudud u jecel amniga kombuyuutarka.
Marka laga hadlayo waxaad ka faaloonaysid ee ku saabsan wax ku biirinta bulshada, hadday tahay su'aal kale oo ku saabsan madax-bannaanida ama kaliya akhlaaqda caadiga ah ee isku dayaysa inay ku hesho sumcad wanaagsan, waxaan leeyahay saaxiibo wanaagsan oo aan waligood la wadaagi karin baylahdooda ama qalabkooda ay abuurayaan oo aan ku dhihi karo Waa hubaal in ay yihiin qaar ka mid ah kuwa ugu fiican "haakarisyada" aan ogahay.
Dhanka kale, dhib malahan inaad daabacdo agab wanaagsan oo aad uga faa'iideysan karto u nuglaansho kasta, haddii aan lagaa aqoon, waxay u badan tahay inay dib u midoobi doonaan oo ay daabici doonaan koox ka weyn, kiiska ZZAZZ-forum iyo waa SDBS qaali ah in kasta oo si cadaalad ah loo yaqaan, tan waxaa lagu qasi jiray inta udhaxeysa Metasploit, Nmap iyo agab kale oo qalab ahaan iyo qarsoodi la'aan, qorayaasha lama siinayo aqoonsi, si fudud ayaa loo yaqaan, kaas oo xitaa laydh ku ridi karo koontadooda «hack ku socota Facebook ".
Aniga dhankeyga, waxaan doorbidayaa inaan faafiyo "natiijooyinkeyga" kaliya hadii ay dhacdo in cilad ay jirto, ̶q̶u̶e̶ ̶p̶a̶g̶u̶e̶n̶ ̶d̶e̶c̶e̶n̶t̶e̶m̶e̶n̶t̶e longer hadana wax faa iido ah malahan hadii kale waxaan doorbidayaa inaan badbaadiyo, qoraaladeyda ma ahan meel xun in la daabaco waa la fahmi karaa in la daabaco iyaga oo si xun u qoran, in kasta oo ay si fiican u shaqeyso, sida aan aniga qudhaydu fahamsanahay, aniga ayaa ah qofka kaliya ee ka dhiga inay si sax ah u shaqeyso.
Ereyga "Hacker" horeyba wuu u xirnaa.
Ku jawaab Kra
Waan ku raacsanahay. Bulshadu ma jirto ama faa iido uguma jirto sida la sheegay, ama sidii ay ahayd bilowgii 90-maadkii.
Maanta software-ka bilaashka ah ma wado bulshada, waxaa wada shirkado waaweyn. Mashruuc kasta oo barnaamij bilaash ah oo bilaash ah ayaa ka dambeeya Red Hat, waxaa jiray Novell, Microsoft, tan IBM, Oracle, ama shirkad kale oo u adeegta iyaga faa'iido ahaan, maahan inay doonayaan inay wadaagaan saacadaha shaqadooda.
Intaas waxaa sii dheer, softiweerku wax badan ayuu badalay, xaqiiqada IT-da waxbadan baa iska badalay, mashaariicdan wax aan macquul aheyn aniga inaan fariisto kursiga kuraasta ee gurigeyga, iyo iyadoo aan loo eegin sida uu yahay guruubka C, cabirkiisa iyo kakanaanta barnaamijka softiweerka ah sida CloudStack, KVM ama PostgreSQL, ma sameyn karo wax ka badan fekerka iyo barashada, way ka fog tahay wax ka beddelka dusha sare ilaa hoose iyo la qabsiga 100% baahideyda gaarka ah.
Waqtiyadii uu softiweerka bilaashka ah ee emuje uu ku siin jiray barnaamijiye gurigiisa ayaa dhammaaday in ka badan 20 sano ka hor, marka la fiiriyo tan, imisa sano ayaan sugeynay Hurd si uu u sii daayo mid runtii deggan oo la isticmaali karo? Ama intee in le'eg ayay qaadatay in la arko debian-ka caanka ah ee aan nidaam lahayn, iyo sida ballaaran ee loo isticmaalo runtii?
Waxa kaliya ee ay si buuxda u kobciso bulshada ayaa ah qaar ka mid ah bay'adaha garaafka leh, sida KDE, ama qalab fudud sida amar gaar ah, ama wax asal ahaan ka soo jeeda terminaalka oo lagu sameyn karo dhibaato la'aan jawiga garaafka, laakiin waa 99,99, 13% isticmaalaha linka xirfadleyda ah ayaan xiiseyneyn. Anigu waxaan ahaa isticmaale Linux ah ku dhowaad 5 sano, laakiin waxay ahayd XNUMX sano tan iyo markii aan joojiyay la halganka la-lahaanshaha Linux-ka ee terminalkeyga, waxay si aad ah u saameyneysaa wax soo saarka. Waxaan doorbidayaa inaanan waqtigaas lumin, isticmaal Windows ama Mac oo aan u adeegsado waqtigaas lumiyay shaqadayda
Wax la mid ah ayaa ku dhaca haakarisyada. In aura sirta ah oo ku hareeraysan haakarisku ay dhamaatay, iyo in "haakarisku xunayn" ay been tahay. Intooda badani waxay u sameeyaan lacag, uma sameeyaan samafal si qalad loo helo oo adduunka loo caawiyo, mana u sameeyaan hiwaayado. Haddii ay mushahar qaataan si ay uga helaan nuglaanta nidaamka gudaha, ama ay u ceebeeyaan shirkad la tartameysa, way sameyn doonaan iyaga oo aan il birqabin. Taas oo ah wanaag iyo haybad ayaa sidoo kale dhammaatay 90-meeyadii.
Mahadsanid Gonzalo, waad ku mahadsan tahay wadaagista
Waxaan fahansanahay ilaa xad dhibtaada bulshada, inaan kubilaabo maxaa yeelay halkan Latin Amerika, waa wax aan jirin (marka la barbar dhigo meelaha kale dabcan). Laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan muujiyo dhowr arrimood. Marka hore, inkasta oo maanta shirkado badani ay indhaha saareen isha furan (maahan barnaamij bilaash ah fadlan) tani ma tilmaamayso inay haystaan ​​saxan lacag ah oo koodhkooda ah ama wax la mid ah ... uguyaraan xagga aragtida kernel iyo git I awooday inaad aragto sikastoo ay uweyntahay shirkadaadu, hadii koodhka la soo saaray uusan fiicnayn, ma galayo ... taasi waa sahal. Oo haddaan xoogaa ka fikirno, sidee baa shirkadahaasi u galayaan haddii si sax ah koodhku u yahay mid tayo leh, oo ay beello ka been abuurtay waqti iyo dadaal. Iyo sababta oo ah waxay jecel yihiin maadada, oo waxay noqdeen khabiiro waqti kadib. Taas ayaa sidoo kale noo horseedaysa xaqiiqda ah in shirkadaha ugu fiican isla waqtigaas ay kireystaan ​​khubarada ugu fiican, si ay uga shaqeyn karaan sameynta waxa ay jecel yihiin.
Iyo run, qadarka koodhka ee maanta la soo saaray waa mid aad u weyn oo qofku si dhib yar u qori karo wax kasta oo xoqan ... laakiin inaan runta sheego, xitaa isagoo aan ahayn Curuugga ugu weyn adduunka ayaan ku dhiirran lahaa inaan wax ka qoro gebi ahaanba xoqitaanka: marka hore maxaa yeelay ma heli doono nolol igu filan oo u dhiganta tayada shaqada kale, tan labaad maxaa yeelay waa inaan yeeshaa maskax aad u sarreysa oo i aaminaysa aniga oo ka wanaagsan dhammaan maskaxdan cajiibka ah ee sidoo kale u heellan soo saarista nambarka tayada iyo dib u eegista iyo tijaabinta iyo ka dhigista. Hadana haddii aad rabto inaad ku darto baahi gaar ah, waxaan aaminsanahay inaanan aqoon mashruuc bilaash ah ama furan oo kuu diidaya hindisaha ... dabcan, haddii aad qorto koodh xun ama aad rabto inaad ku soo rogto gebi ahaanba isbeddel xagjir ah oo jebin kara waxyaabo badan ka hor intaadan ku darin ... waa iska cadahay in isbadalkan uusan "sii socon doonin", laakiin waa hubaal tayada ku jirta marxaladaha bilowga ah ee iyaga ka dhigtay kuwo marka horeba ...
Haddii aad horay u joojisay isticmaalka Linux muddo 5 sano ah, markaa waa inaadan tixgelin naftaada hal 🙂 taas fudud. Waxa aad ugu yeerto "waqti lumay", waxaan ugu yeeri lahaa "lumay isticmaale", laakiin tusaale ahaan, haddii aan ahay guruub ka tirsan C oo aan jeclaan lahaa GNU Linux ama mashruuc kasta, halkii aan ka sugi lahaa kuwa kale inay howsha ii qabtaan , Waxaan bilaabi lahaa inaan kudarro khadadkaas aan doonayo inaan waxbadan kaga arko barnaamijkeyga si ay "si sax ah" u shaqeyso. Waana ogahay dhowr qof oo ka shaqeeya waqtigooda "bilaash" inay barnaamijyadan ka dhigaan kuwo ka sii wanagsan, daryeelkoodana u sameeya baaritaanna ku sameeya ... laakiin waxaan u maleynayaa inay taasi horeyba u lahayd mid walba
Hadana kuwa wax jabsada waa xun yihiin, waxaan ka bilaabaynaa isla fikirkaas, in haakarisku kaliya u heellan yahay helitaanka nuglaanta ... hadaanay ahayn haakarisyada waaweyn sida Ken Thompson, Dennis Ritchie, Richard Stallman, Linus Torvalds, Edwin Catmull .. Liisku wuu sii socon karaa waana sii socon karaa, laakiin haddii aadan aqoon magacyadaas midkoodna, waa sababta oo ah dhab ahaan ma aadan fahmin waxa hackerku u jeedo asal ahaan ... kaliya waxay ku dhegan yihiin "fikradda khaldan" ee ay diidaan ' aad ayaad u jeceshahay ... Oo haddii aad u malaynayso in sharafnimadu dhammaatay 90-meeyadii, waa hagaag tahay waan ka xumahay inay si daran noloshaadu kuugu dhacday, laakiin aan kuu sheego inay weli jiraan dad ka shaqeynaya inay dunidan wax yar ka dhigaan ka sii darran, halkii aad iska ilaalin lahayd shaqada oo aad lahayd bixitaanka ka fogaanaya «waqtigaas qashinka» ...
Salaan iyo mahadsanid faallooyinka,
Hi Kra, waad ku mahadsan tahay wadaagista, waan fahamsanahay aragtidaada waxaanan kaliya rabay inaan ka dhiibto dhowr fikradood oo shaqsi ah tan. Pentester iyo haakaristu waa waxyaabo gebi ahaanba kala duwan, haddaynu u malaynona in jabsade Hiirad u heellan uun helitaanka nuglaanta, si fiican laga bilaabo xilligaas wixii ka dambeeyay waxaan si xun u bilownay ... in sidii qodobka koowaad, kan labaad uu la mid yahay, maaddaama ay jiraan dad aad u xirfad badan. dadka, in kasta oo magacyadooda aan lagu qorin xarfaha dahabka ee joornaalada adduunka ugu fiican (taasi waxay noqonaysaa su'aal kaliya oo ah ego) haddana waxay u huraan qayb weyn oo ka mid ah maalintooda mashaariicda noocan ah. Waana ay sameeyaan sababtoo ah way ku raaxaystaan ​​inay sameeyaan, haddii kale ma heli doono sabab igu filan oo aan ku arko iyagoo shaqeeya habeen Axad ah, ama ay qaataan daqiiqado yar maalin kasta ka dib maalin shaqo dheer ...
Ugu dambeyntiina, tanina sidoo kale waa fikrad shaqsiyeed, aakhirka waxay noqon doontaa dhaxalka aad uga tagto adduunka "natiijooyinkaaga" ... haa, maskax badan oo waaweyn ayaa sameeya software-ka waxa ay yihiin, qaar baa la aqoonsan yahay, kuwa kalena maahan wax badan, laakiin taasi waxay kuxirantahay midkasta ... Waxaan wadaagay qoraalo iyo koodhadh meelo badan, waxaanan layaabay markaan arkay inta khaladaad ee ay lahayd, iyo imisa fursadood oo lagu wanaajinayo waxtarka, cabirka, waxsoosaarka, caqliga, iwm. ... oo laga yaabee inay taasi tahay wax aniga aniga shakhsiyan aan jecelahay inaan sameeyo oo aad u badan tayda, laakiin sida ay jiraan dad u sameeya kaliya lacag iyo lacag, waxaa jira qaar sameeya maxaa yeelay si fudud ayaan u jecel nahay 🙂 laakiin Way fududaan laheyd aniga inaan ku dalaco mid kasta oo ka mid ah boostadan, halkaasoo runtii aanan dhihi doonin wax cusub, laakiin waxaan arkay dad lacag badan ka qaadaya qaddar ka kooban xitaa ka fudud inta aan ku wadaagi karo sadarradan.
Si xarago leh !!! Had iyo jeer waan ku raacaa… ha u istaagin xagga sare !!!
Jawaab Ricardo Rios
Aad baad ugu mahadsan tihiin Ricardo 🙂 wuxuu igu dhiiri gelinayaa inaan sii wado wadaagista markasta oo aan karo 😉 Salaan
Sida ku xusan qoraalka 'Zuse-Fredkin Thesis', "koonku waa aaladda elektarooniga ah" taas oo ah in la yiraahdo Mashiinka Caalamiga ah ee Turing, maaddaama ay ku jirto hawlo u dhigma Mashiinka Caalamiga ah ee Tijaabinta ayaa la fuliyaa (sida mashiinnada dhijitaalka ah ee la adeegsan karo - kumbuyuutarrada). Taasi waa in la yiraahdo, qiyaas ahaan, koonku wuxuu awood u leeyahay ku dayashada mashiin kasta taasna waxay ka dhigeysaa mashiin weyn. Si kastaba ha noqotee. Haddii saynisyahan ama injineer abuuro ama ogaado shaqooyin ama xalal cusub oo koonkan gudahiisa ah, tixgelinayana in xisaab ahaan loo hadlayo, tani waxay u dhigantaa (ama in ka badan laakiin taas garan mayno) oo ah Mashiinka Caalamiga ah ee Turing: injineerada, saynisyahannada, iwm. Iyagu ma hackers?
Ku jawaab MarkVR
Hello Mark 🙂 maxaa yeelay ciyaarta noloshu waa mowduuc aad u xiiso badan, waxaan fursad u helay in aan wax yar ka akhriyo isla waqtigaasna mar aan barnaamij ka diyaariyey si aan u arko sida ay ugu sii ballaadheen guddi yar oo dhawr boqol oo pixels ah. Laakiin aan u nimaadno mowduuca, farqiga ugu weyn ee u dhexeeya automatikada gacanta iyo xisaabinta guud ayaa ah in otomaatigga gacanta uu qeexay oo uu qeexay xeerar, kuwan waxaa loogu soo bandhigayaa qaab fudud barnaamijka, laakiin waxay ka tarjumayaan xaqiiqo aad u ballaaran oo ka sii adag.
Waxaa xusid mudan in saynis yahanada ama injineerada midkoodna uusan abuurin sharciyo dabiici ah (qawaaniinta lagu maamuli lahaa otomaatiga gacanta) maadaama kuwani ay isugu jiraan waxyaabo muuqda iyo waxyaabo kale oo aan la arki karin (xitaa ka sii muhiimsan). Soo helitaanka (macnaha daaha ka qaadista) sharci cusub oo koonka ka jira waa ficil la amaano, taasna illaa xad waxay tilmaamaysaa awood u lahaanshaha aragtida waxa dadka kale aysan arkin, sida aan uga faalloonnay nuxurka qoraalka, laakiin yar iyo farqiga khiyaanada leh ee kaa caawin kara cadeynta shuruudaha. Hackers waxay "abuuraan" macnaha awood u leh inay soo saaraan sharciyo xisaabeed cusub, oo ku saleysan mabaadi'da xisaabeed ee si fiican loo yaqaan. Saynisyahannadu waxay "daahfurayaan" mabaadi'dan xisaab / muuqaal / iwm.
Sameynta digniintaan yar waxaan arki karnaa in si qoto dheer oo qoto dheer u ah mowduuca, labadoodaba loo arki doono in loo tixgeliyo hackers-ka macnaha dhabta ah ee erayga 🙂 maadaama ay arkeen waxyaabo dadka kale u qaataan si fudud, ayna ogaadaan waxyaabo ka baxsan aragtida guud.
Mawduuc aad u xiiso badan 🙂 malaha wax yar ayaad ka qori kartaa, inkasta oo taasi inyar uga cararayso dunida Linux si inyar oo dheeri ah loogu aado fiisigiska aragtida iyo xisaabta 🙂 Salaan iyo mahadsanid wadaagista
Waad ku mahadsantahay jawaabta.
(14-6) x3 = 24? Ma sidaas bay ahayd?
14 tirin maayo 🙂 waa inay ahaadaan sida saxda ah tirooyinka 1,3,4 iyo 6 🙂 taasi waa 1 x 4 - 6 + 3, laakiin maaha 63/14 ama wax la mid ah. Haddii aad rabto jawaabta, ii soo sheeg 🙂 laakiin waxaan ka tegayaa fursadda inaan iskudayo
Natiijo macquul ah
Ku jawaab Cesar Rada
Waxay igu qaadatay 3 maalmood laakiin halkan waa:
Ku jawaab Lopez
Saaxiib, buugga aad ku talisay wuxuu ku qoran yahay Ingiriis, sax?
Waxaan ku aqriyay ingiriisi, laakin kuuguma sheegi karo hadii loo turjumay isbaanish meel, nasiib wacan taas si kastaba ha noqotee, Salaan
Jawaab 01000011 01011001 01000010 01000101
21 + 4 waa 25 😛
Dunida Tecprog dijo
Gelitaan aad ufiican, laakiin waan khaldanahay, erayga hacker ayaa qaab ahaan loo badalay waqti kadib iyadoo loo marayo warbaahinta oo u sawireysa "xun"; Si kale haddii loo dhigo, waa dad xiise leh oo aqoon qoto dheer u leh mowduucyo aad u gaar ah; si uun baan ugu xariiriyaa in jabsaduhu u siman yahay koofiyadda cad iyo jabsadaha koofiyadda madow. 🙂
Jawaab Tecprog World
GLPI - Maareynta Bilaashka ah ee Beerta Kombiyuutarka
Inboxer: Macaamil wanaagsan oo Google Inbox ah oo loogu talagalay Linux